Finfinnee: Marii barsiisotaafi 'Puush Aappii' Dr. Abiy - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Barsiisonni piroofeesar Bayyanaa Pheexiroos yoo simatan
Dubbiin 'Puush Aappii' hojjechuu MM Abiy Ahimad marsaalee hawaasaa irratti yaada gara garaa kaasaa jira. Gariin yoo itti gammaduu ibsan gariin ammoo waan isaan quuqe fakkaata.
MM Abiy Ahimad wayita barsiiftota yuunivarsiitiiwwan gara garaa kuma 3 ol waliin waajjira isaaniitti mari'atanii ture dubbichi kan raawwate.
Namoonni fedhiin gara waltajjii akka bahan gaafatan, achiis barsiisonni gara waltajjiitti bahan akka 'puush aappi' hojjatan gaafatan.
Barsiisota sadi osoo hin dadhabiin puush appiicha hojjataniif, gara Chaayinaa deemuun leenjii guyyoota 15 akka fudhatan itti himaniiru.
Ministirri muummichaas puush aappicha barsiisota kanneen waliin hojjechaa kanneen haalan hin hojjenne to'achaa turan jedhu hirmattonni BBC'tti yoo himan.
Kana malees barsiisota dubartootaas gara waltajjiitti wayita affeeran, barsiisonni 36 gara waltajjichaa figanii bahaniiru.
Hundaafis carraa daawwannaa Chaayinaa kennaniiru.
Pirofeesar Bayyanaa Pheexiroos
Wanta nama seeqsu maricharratti ta'e kan biroo, simannaa pirofeesar Bayyanaa Pheexiroosiif taasifame ture jedhu hirmaattonni.
Erga hirmaattonni galma seenanii booda xiqqoo barfatanii kan dhufan piroofeesar Bayyanaan, gara teessoo fuulduraatti akka dhufan Dr. Abiyyiin afeeramani yoo fuulduratti dhufan barsiiftonni harka walitti dhahanii simataniin.
Morkataa siyaasaa ta'uu isaanii kan hubatan MM, "harka walitti dhahuun kun tajaajila arma dura nuuf laattaniif malee filannoof miti" jechuun itti qoosuu isaanii himu.
Dubbii barsiistota 42
Waggoota 25 dura ilaalcha siyaasaa qabaniifi gaaffii walabummaa dirree barnootaa irratti kaasaniin barsiisota hojii isaaniirra ari'aman hojiitti deebisuuf mootummaan qophii ta'uu kan himan ammoo hogganaa waajjira MM obbo Fitsum Araggaati.
Kanumaan walqabatees barsiisonni siyaasni fi hojiin barsiisummaa wal makuun akkasumas gurmaa'insi tokko-shanee barattootaafi barsiisotaa hojii isanii danqaa akka jiru komataniiru.
MM kanaaf deebii yoo kennan, rakkoon guddaan siyaasni fi barnooti wal makuu isaa qofa osoo hin taane, dhaabbileen barnoota olaanoo laafoo ta'uu isaaniiti jedhan.
Barumsi dhaabbilee kanneenii dhiibbaa uumuu kan hin dandeenyeefi humna kan hin qabne ta'uudhas jechuun ibsa bal'aa kennaniiru jedhu barsiisonni dubbifne.
Dhimmoota ijoo maricha
Marii kana irratti dhimmoota gurguddoo hedduutu ka'e. Qulqullina barnootaa, qaala'uu jireenyaa, dhimma Eertiraafi dhimmoota siyaasaa, hawaasummaafi diinagdee biroos ni dabalata.
Ministirri Barnoota Obbo Xilaayee Geexee ibsa gabaabaa erga kennanii booda ture kan MM gara waltajjiitti afeeran.
MM gama isaanii "isinirraan waa hedduu dhagahuu barbaada" jechuun barsiisonni gaaffii akka dhiyeessan afeeraniru jechuun barsiisaa Muluu Ma'ishoo BBC'tti himaniiru.
Qulqullina barnoota ilaalchisuun qajeelfamni qophaa'aa jiru jira, akkuma xumurameen barsiisonni bal'inaan irratti mari'atu, sun rakkoo qulqullina barnootaa ka'e ni fura jechuun MM akka dubbatan Dr. Fireewu Amoonye dubbataniiru.
Qulqullina barnootaan alatti waa'een nageenya biyyaa, buqqa'uu lammilee, birmadummaa biyyaafi yaadoleen heddun ka'u himu.
FBI gara biyyaatti dhufe haleellaa boombii akka qoratu eeyyamuun birmaduu biyyaa cabsa gaaffi jedhuuf, "biyyi hiyyeettiin birmaduu hin qabdu, biyyoonni badhadhaan maal akka hojjechaa jirru ni beeku," jechuu isaanii barsiisaa Tafarii Firrisaa BBC'tti dubbataniiru.
Eertiraa waliin waa'ee Baadimmee dubbachuun dursa maaliif hariiroo hawaasummaa lammiilee biyyoota lamaanii cimsuun akka barbaachises ibsa kennanii jiru.
Dhaabni biyya bulchaa jiru yaad-rimee ittiin biyya bulchu akka jijjiiru, aanga'oonni naannolee aangoo akka gadhiisanfi jijjiiramoota gama siyaasaan biyyattiin itti adeemtu waan mul'isu dubbachuu isaaniis barsiisonni ni himu.
Waltajjichi yaadonni hedduun kan irratti dhaga'amaniifi marichatti gammachuu qabaachuu kanneen BBC'n dubbise himaniiru.